Zvapupu zvaJehovha zvemuOceania
VANOGARAMO 41 051 379
VAPARIDZI 98 574
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 67 609
Mudzidzisi Wake Akazobvuma Papera Makore 9
Olivia, wekuAustralia, paakanga achiri kugiredhi zero akakoka mudzidzisi wake kuChirangaridzo. Kwemakore 8 akazotevera, Olivia airamba achingomukoka kuChirangaridzo. Muna 2016, mudzidzisi uya akazofona achitaura kuti aizouya. Akataura kuti ainzwa kuti airemekedzwa chaizvo nekuti Olivia aimukoka gore negore. Saka mudzidzisi wacho akauya kuChirangaridzo pamwe chete nemurume wake. Murume wacho aitoziva kuti Imba yeUmambo yemuguta iroro yakanga yavakwa riini nekuti akamboshanda kukanzuru. Akaudza hama kuti akashamiswa chaizvo nekurongeka kwakanga kwakaita basa rekuvaka Imba yacho yeUmambo. Mudzidzisi wacho nemurume wake vakanakidzwa chaizvo musi iwoyo zvekuti vakatozopedzisirawo kubuda paImba yeUmambo.
Australia: Kushingirira kwaOlivia kwakava nemubayiro kwapera makore 9
Akaverenga Bhuku Racho Katatu
Jacintu nemudzimai wake vanogara kuTimor-Leste. Sezvo vakanga vakazvipira kuchechi yeRoma, vakanetseka chaizvo mwana wemukoma waJacintu paakava mumwe weZvapupu zvaJehovha uye asingachapindi chechi yemhuri. Jacintu akafunga kuverenga bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? kuti aratidze mwana wemukoma wake kuti akarasika. Aida kuona kuti mune dzidziso dzenhema here. Akazoudza mudzimai wake kuti: “Ndakaverenga bhuku racho. Rinotaura chokwadi.”
Mudzimai wacho akati, “Hauna kunyatsoriverenga zvakanaka. Riverenge futi usingamhanyi-mhanyi.”
Jacintu akariverengazve ndokuudza mudzimai wake kuti: “Zvarinotaura ndezvechokwadi.” Uye akatiwo: “Zvese zvinobva muBhaibheri. Uye zvarinotaura zvekuti hatifaniri kunamata vakafa zviri muBhaibheri.”
Mudzimai wake akati: “Riverenge kechitatu uchimaka ndima dzaro. Uchaona kuti pane parinonyepa chete.”
Jacintu akanyatsoverenga bhuku racho achitomaka ndima dzaro. Paakariverenga kechitatu, akati: “Zvarinotaura ndezvechokwadi! Mwana haana kurasika.” Iye zvino, Jacintu ava kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha.
Akaudzwa Nemwanasikana Wake
Imwe hanzvadzi piyona inogara muGuam, yakaenda kumba kwemumwe mukadzi werudzi rwechiPohnpeian ikamuratidza vhidhiyo inonzi Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri? Hanzvadzi yacho yakati yaizodzoka zvakare. Payaidzokera ikoko, yaingowana mukadzi wacho asiri pamba. Rimwe zuva mwanasikana wemukadzi wacho ndiye aiva pamba, hanzvadzi iya yakamuratidza imwe yemavhidhiyo akanzi Iva Shamwari yaJehovha. Musikana wacho akanakidzwa chaizvo. Hanzvadzi iya payakazodzoka, amai vacho vakanga varipo uye vakafarira mashoko emuBhaibheri. Mwanasikana wavo akanga avaudza kuti vaende vese kuchechi kwemukadzi akamuratidza vhidhiyo. Pamwe ndizvo zvakaita kuti amai vacho vafarire. Vakaratidzwa kuti chidzidzo cheBhaibheri chinoitwa sei uye pakabva parongwa kuti varambe vachidzidza.
‘Vakaita Semakwai Asina Mufudzi’
Mumwe mutariri wedunhu anonzi Terence akaenda naStella mudzimai wake kuInakor, ndima isina ungano muPapua New Guinea. Terence anoti: “Patakanga tichakarara mangwanani ezuva rakatevera racho, takanzwa dhoo richigogodzwa. Vanhu vakawanda vakanga vakatimirira panze, saka takabuda tikavaparidzira kubva na6 kusvika ava masikati. Takabva tambozorora tichigeza. Patakapedza, takaonazve vamwe vakawanda vakatotimirira, saka takabva tavaparidzirawo kubva na2 dzemasikati kusvika pakati peusiku.” Mangwana acho Terence naStella vakafumobata jongwe muromo vachienda kune imwe nzvimbo. Vanhu vakawanda vakauyazve vachivatsvaga pamba pavaigara, asi vakavashaya. Terence anoti: “Pavakazoziva kwatakanga taenda, vakabva vatevera vakatiwana. Takavaparidzirawo kusvika ava masikati. Patakadzokera kumba kwataigara, rimwewo boka revanhu rakanga rakatimirira. Izvi zvaigara zvichingoitika mazuva ese. Vanhu vari ikoko ‘vakaita semakwai asina mufudzi.’”—Mat. 9:36.
Papua New Guinea: Vanhu vakatomirira Terence naStella
Chiremba Anopiwa Zvipo
Mumwe piyona anonzi Agnès, anogara kuNew Caledonia, anofanira kugara achienda kunoona chiremba, nekuti ruoko rwake rwunogara ruchirwadza. Chiremba wacho paaimubatsira, akataura kuti zvaimunetsa kuti Mwari ane utsinye here sezvo aiona vanhu vakawanda chaizvo vachitambura. Agnès akanyengetera nechemumwoyo achitenda Jehovha kuti akanga amupa mukana wekuti adzivirire zita rake. Akabva aratidza chiremba wacho turakiti rakanzi Kutambura Kuchazombopera Here? uye akamuverengera Zvakazarurwa 21:3, 4.
Chiremba wacho akati: “Handifungi kuti vhesi yamaverenga inowanikawo muBhaibheri rangu nekuti rinongova nemabhuku eEvhangeri chete.” Paakaziva kuti Agnès mumwe weZvapupu zvaJehovha, akamuudza kuti akanga ambosangana neZvapupu kunyika kwake kuChile.
Agnès akayeuka kuti paJW Broadcasting pane mushumo webazi rekuChile. Saka paakazodzokera kunoona chiremba wacho, akaenda netablet yake uye akamuratidza vhidhiyo yemushumo wacho. Chiremba wacho akabayiwa mwoyo paakaona Bheteri neImba Yemagungano zvemuChile. Pashure paizvozvo, Agnès akati, “Chimwezve chandakuvigirai iBhaibheri rakazara, uye mava kukwanisa kuverenga Zvakazarurwa 21:3, 4 yandakambokuverengerai vhiki yapera!” Chiremba wacho akasimuka achifara ndokubva ambundira Agnès achiti, “Maita basa chaizvo nezvipo izvi zvakanaka!”
New Caledonia: Chiremba wake akabayiwa mwoyo
Agnès paakazodzokerazve ikoko, akaenda nebhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? ndokubva aenderera mberi nekutsanangura zvimwe zvinoita kuti panyika pave nekutambura. Chiremba wacho akamuudza kuti akanga ava kumbodzokera kuChile kuzororo uye kuti aizotakura bhuku rake kuti anopedzisa kuriverenga.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Oceania